Madaxda Fadaraalka oo Hanbalyo ka diray Maalinta Ciidanka xooga Dalka Somaliyed – Idil News
Madaxda Fadaraalka oo Hanbalyo ka diray Maalinta Ciidanka xooga Dalka Somaliyed
Guddoomiyaha Baarlamaanka Fadaraalka ah ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa isna hambalyo iyo bogaadin u diray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed xuska maalinta ciidanka awgeed, isagoo u rajeeyay in sanadkan kiisa kale ay ku gaaraan horumar iyo baraare.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Fadaraalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya ugu hanbalyeeyey munaasibadda sanadguurada 57aad ee maalintii la asaasay Ciidanka Xoogga ee 12-kii April, sannadkii 1960-kii. Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya ay yihiin dhidibada uu ku taagan yahay Qaranka Soomaaliyeed, isla markaana ay taariikh weyn ku leeyihiin dalkeenna.
“Waxaan halkaan hanbalyo ballaaran uga dirayaa saraakiisha, saraakiil-xigeenka, dableyda iyo qoysaska Ciidanka Xoogga, waxaan ugu hanbalyeynayaa munaasibada 12-ka April. Waxaan ciidankeenna geesiyaasha ah u rajaynayaa horumar iyo inay ku guuleystaan hawlaha iyo waajibaadka qaran ee loo igmaday” Ayuu yiri Ra’iisul Wasaaruhu.
Wasiirka Gaashaandhigga Sooamaliya ayaa u hambalyeeyay saraakiisha, saraakiil xigeennada, dableyda, alifleyda iyo xaasaskooda xuska maalinta ciidanka xoogga dalka awgeed, waxaana uu u rajeeyay in sanadkan kiise kale ay ku gaaraan horumar iyo baraare.
Wasiirka Difaaca Soomaaliya oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa xuska 57 guurada ka soo wareegtay aas aaska ciidanka xoogga dalka awgeed ugu hambalyeeyay
“12-ka April waa markii la aas aasay ciidanka xoogga dalka, waana munaasabad nagu weyn oo tilmaameysa hogaanka iyo difaaca dalka, waxaana ciidamada xoogga dalka ugu hambalyaynayaa inay ku gaaraan horumar iyo baraare, iyo wadanka oo laga ciribtiro argagixisada Al-Shabaab” ayuu yiri Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya.